Apple dia afaka namaha ny olan'ny vibration an'ny HomePod | Avy amin'ny mac aho
Andro vitsy lasa izay, ilay mpiara-miasa amintsika, Jordi Nolazainy taminay ny momba ireo orinasan-tserasera izay nametraka ny vahaolana eny an-tsena ka ny hovitrovitra avy amin'ny HomePod miaraka amin'ny karazana silika izay efa nampiasaina tao amin'ny fotony aza manao rangotra boribory eo ambonin'ireo fanaka vita amin'ny varnished.
Ankehitriny, manomboka miparitaka eraky ny tamba-jotra ny tsaho fa Apple dia efa afaka nametraka litera tao amin'ilay laharana fivoriany ary ny HomePods izay novokarina dia efa nisy fototra namboarina tamin'ireny fanatsarana ireny izay hanafoana tanteraka ny olanao efa afaka namaky tato ho ato.
Araka ny efa fantatrao, andro vitsy lasa izay ny tambajotran'ireo tambajotra dia tototry ny lahatsoratra izay nilazana fa ny HomePod vaovao dia tonga kilema ho an'izay rehetra nahita azy tamin'ny fanaka vita amin'ny hazo ary izany dia vokatry ny silika izay anaovana azy. Raha vantany vao amboarina ny fotony, ankoatry ny vibrations micro-vitany dia mamela tasy fotsy izy amin'ny hazo fa amin'ny tranga maro dia manjavona rehefa esorintsika ny HomePod amin'ilay toerana fa amin'ny an'ny hafa kosa tsy izy ireo.
Vetivety dia nametraka tsihy vita amin'ny hoditra na poly-leather ireo orinasa mpamatsy vola fa ny ataon'izy ireo dia ny silipo avy eo am-pototry ny HomePod tsy mahatratra ny hazo fanaka. Ny vahaolana amin'ny olana dia tena tsotra, fa misy kosa ireo mpandinika indostria izay nanipika fa tsy azon'izy ireo ny tsy fahitan'ny Apple an'io lafiny io. Miresaka inona izy ireo izay injenieran'ny famolavolana indostrialy mahalala fitaovana Tokony ho fantatrao fa amin'ny tranga fitenenana takelaka dia tsy maintsy jerenao ireo akora simika mandrafitra ny fototr'izy ireo sy ireo mety tsy fifanarahana mety hitranga amin'ny faritra samihafa.
Ny diloilo dia mamela ny porous hazo, raha ny varnish kosa dia misy vokany mifanohitra ...
Araka ny efa nolazainay, ny Apple mihitsy dia nitatitra fa, tokoa, mitranga io olana io ary izany no mahatonga ny tsaho fa efa nanao fanovana teo amin'ny tsipika fivoriambe izy ireo ka novaina ity ampahany ity satria vokatra efa ho 400 euro no tsy izany. dia tsy maintsy misy lesoka amin'ny famolavolana indostrialy toa ilay nodinihintsika. Ho hitantsika eo raha tonga any Espana ny HomePod ny fototra silika dia nosoloina iray hafa vita amin'ny elastomer hafa izany dia tsy mifanentana amin'ireo velaran-tarehy vita amin'ny varnished. Ny fanovana an'io fomba io eo amin'ny tsipika fivoriambe dia mety hidika ho fahatarana mihoatra ny iray volana sy sasany ary izany dia ny mpamatsy izany no hiasa kely mba tsy hiakatra eny an-tsena ireo singa HomePod voakasik'izany. Hanamboatra vahaolana ve i Apple ho an'ireo izay efa manana HomePod amin'ity olana ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Mety efa nalamin'i Apple ny olan'ny vibration an'ny HomePod
Apple dia namoaka macOS High Sierra 10.3.3 miaraka amina fanamboarana hamahana ny bibikely Telugu